Fitsaboana any Bali " Journey-Assist - Fitsaboana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fanafody any Bali
Fanafody any Bali (Indonezia)
Endrika fanafody any Bali
Klinika tsy miankina BIMC tsara indrindra any Bali
Dentika any Bali
Inona no tokony hatao raha manana olana ara-pahasalamana ao Bali ianao
Ny adiresy sy ny laharan'ny telefaona klinika
Mila fiantohana ara-pahasalamana ao Bali aho
Rohy mahasoa momba ilay lohahevitra:
Fanafody any Bali. Hopitaly, farmasia.
Nivoatra be ny fizahantany any Bali, koa marobe ny toeram-pitsaboana manome serivisy fitsaboana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary manana ny fitaovana maoderina indrindra. Ny fitsaboana ao anatiny dia tsy ambany noho ny kalitao amin'ny fitsaboana any amin'ireo tany mandroso. Saingy, ny safidin'ny andrim-panjakana iray dia manan-danja lehibe, satria miovaova be ny kalitaon'ny serivisy sy ny vidiny. Mba hialana amin'ny fitsaboana be dia be, ilaina ny manomana mialoha ny fiantohana ara-pahasalamana amin'ny fitsangatsanganana.
Ny toeram-pitsaboana samihafa any Bali dia manana toetra samy hafa. Ho an'izay mampiasa ny zava-bita ara-tsiansa sy teknolojia farany indrindra, misy hafa; Betsaka koa ny dokotera tsy miankina. Ny fitaovana ampiasainy indraindray dia tsy dia maoderina loatra, fa ny fihetsika manoloana ireo marary dia mihaino tanteraka. Raha jerena izany dia tsy ambany amin'ireo toeram-pitsaboana faran'izay tsara indrindra ao amin'ny nosy izy ireo. Amin'ny ankapobeny, afaka milaza isika fa ny fitsaboana dia mivoatra tsara eto.
Amin'ny ankapobeny, Bali dia iray amin'ny toerana tsara indrindra any amin'ny faritra Azia atsimo atsinanana amin'ny resaka fitsaboana. Misy tobim-pitsaboana iraisam-pirenena misy efitrano madio madio, dokotera miteny anglisy tsara, serivisy mahafinaritra ary fanajana ny marary. Tena mampahery izany, na izany aza, ny vidin'ny serivisy ara-pahasalamana tsara dia avo eto. Raha vantany vao tonga ao amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina tsara indrindra any Bali, BIMC, dia azonao atao ny miatrika ny fanendrena tsy tapaka ny fomba tsy dia ilaina loatra hahazoana vola bebe kokoa amin'ny marary. Raha tsy misy fiantohana ara-pahasalamana dia mety hivadika ho goavambe ny fitsaboana. Ny fizaham-pahasalamana voalohany amin'ny toeram-pitsaboana toy izany dia handoa $ 100 farafaharatsiny.
Toeram-pitsaboana tsy miankina tsara indrindra any Bali
Ny toeram-pitsaboana an'ity orinasa ity any Bali dia any Kuta sy Nusa Dua. Ireto no toeram-pitsaboana voalohany eran'i Indonezia rehetra nahazo fankatoavana avy amin'ny Birao Fitsipika momba ny fahasalamana Australiana. Ny asan'izy ireo dia ambaratonga ambony amin'ny mpitsabo ary vidiny manaitra amin'ny serivisy. Ny ankamaroan'ny vahiny dia tsaboina ao amin'ny tobim-pitsaboana amin'ity orinasa ity. Raha misy olana amin'ny fifandraisana (noho ny sakana amin'ny fiteny) dia azo resena izy ireo, satria tsy ny mpiteny anglisy ihany no mahay, fa na ny dokotera miteny rosianina aza.
Na izany aza, alohan'ny handehananao any amin'ny fandraisana, dia tokony atolotry ny hiditra ny fanohanan'ny orinasa fiantohana ianao amin'ny famoahana ny fifanarahana mety, raha tsy izany dia mety hitranga ny tsy ampoizina. Tsy ny mpizahatany rehetra no afaka mandoa ny vidiny feno amin'ny fitsaboana. Na izany aza, ao amin'ny BIMC no ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa sarotra indrindra noho ny any Bali. Noho izany antony izany, amin'ny tranga sarotra, dia mendrika tokoa ny hifandray eto.
Na eo aza izany, ny vidiny manaitra indraindray dia manery antsika hitady fomba hafa. Ny fanendrena voalohany miaraka amina manam-pahaizana manokana dia mitentina $ 100. Azonao atao ny miantso azy any an-trano; avy eo, mazava ho azy, mbola handany vola bebe kokoa aza. Ny fotoana voatondro miaraka amin'ny mpitsabo dia mitentina 50 $. Ny fitarafana ultrasound dia mitentina 250 $, ary $ 50 ny fanadihadiana momba ny tazo voan'ny dengue. Ilaina ny miomana amin'izany amin'ny alàlan'ny fisafidianana orinasa fiantohana mialoha.
Ny mari-pana fiaramanidina dia miasa mafy ao amin'ny efitranon'ny klinika BIMC, izay no antony mampilamina azy. Tena tsara ho an'ny olona voan'ny aretim-po io. Na izany aza, tokony mbola manao akanjo mafana kokoa noho ny mahazatra ianao, na hoe maka akanjo mafana fotsiny ianao, raha toa. Ary koa, ny mpitsidika dia omena kafe matsiro maimaim-poana.
SOS Iraisam-pirenena (SOS Medika Bali)
Ity toeram-pitsaboana ity dia natao ho an'ny vahiny, araka ny porofon'ny anarana. Izy io dia mifanaraka amin'ny fenitry ny serivisy iraisampirenena ary misy fijerena zavatra tsara maro.
Mifandray amin'ny SOS Medika Bal
Kuta 80221, Bali.
Fax: +62 361 721 919
Ny fitantanana klinika dia manao ny ezaka rehetra hahazoana antoka fa mampiasa ny zava-bita ara-tsiansa farany sy haitao farany ny andrimpanjakana. Ny International SOS dia manana ny serivisy fiaramanidina manokana an'ny tenany, izay azo antsoina mandritra ny famantaranandro.
Ny klinika amin'ity tambajotra ao Bali ity dia hita any amin'ireo tanàna maromaro. Ny fandidiana sarotra dia tanterahina tsara eto, na dia mihena be aza ny vidiny raha oharina amin'ny toeram-pitsaboana BIMC. Azonao atao ny mampihatra eto tsy misy tahotra natokana ho an'ny teti-bola eto raha tsy misy fiantohana, raha malemy ilay raharaha ary tsy takiana ny fandidiana.
Ny vidin'ny scanner MRI ao amin'ity toeram-pitsaboana any Denpasar ity dia manomboka amin'ny $ 40. Izay manana visa miasa ("kitas") na visa ho an'ny orinasa dia omena fihenam-bidy 50%. Mitentina 30 $ ny fahitana mpitsabo. Fanadinana mpitsabo nify voalohany - $ 40 Fitaovana fanary sy teknika vaovao ihany no ampiasaina.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - (0361) 300 4040
WatsApp - 0811 398 3030
E-mail - [email voaaro]
Jl. Teuku Umar No. 120, Denpasar - Bali 80114
Jl. Uluwatu No. 69 A, Kedonganan - Bali 80361
Jl. Flamboyan No. 9, Tabanan - Bali
Jl. Raya Pantai Saba No. 9, Janyar - Bali 80581
Dalung Permai Blok C1–4, Dalung - Bali 80361
Jl. Denpasar - Gilimanuk, Badjera - Bali 82162
Siloam Clinic Bali
Io tambajotram-pitsaboana io dia miparitaka be manerana an'i Indonezia. Misy sampana 2 any Bali - any Canggu sy any Kuta. Avo be ny haavon'ny serivisy eto. Manam-pahaizana maro no mihevitra ny toeram-pitsaboana an'ity tamba-jotra ity any Kuta ho ny tsara indrindra manerana an'i Bali. Na izany aza, ny fiantohan'ireo orinasan'ny fiantohana Rosiana dia mbola tsy manefa ny vidin'ny serivisin'ity klinika ity. Avo dia avo ny vidiny eto, na dia ambany noho ny ao amin'ny BIMC aza.
Araka izany dia mitentina 30 $ ny vidin'ny x-ray. Mitentina 200 dolara ny fikarakarana ratra mavesatra vokatry ny fianjeran'ny bisikileta iray, miaraka amin'ny fanadiovana, disinpikanina, ary fanafody omena ao an-trano. Mba hanasitranana ny fahatahorana rantsantanana iray (raha raisina ho fanodinana sy x-ray) dia mila mandany farafahakeliny 150 dolara ianao. Ity tamba-jotra ity koa dia manana serivisy ho an'ny ambulance.
Dokotera Praktek miaraka drty
Jl. Lalana Sunset masoandro No.818, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonezia
Alatsinainy - zoma 11:00 - 19:00 WITA
Sabotsy: 11:00 - 17:00 WITA
+ 62 361 779900
Laharana telefaona vonjy maika - 1-500-911
Laharana telefaona fanendrena - 1-500-181
Any Bali, misy koa ny toeram-pitsaboana mpitsabo aretin-tsaina maro izay manana laza tsara.
911 Clinic mpitsabo nify
Ny klinika amin'ity tambajotra ity dia ao Denpasar sy ao Kut. Raha tonga any amin'ny fandraisana, dia tokony hilaza avy hatrany ianao fa tsy manana fiantohana, raha izany. Somary antonony ny tahanany. X-ray nify iray miaraka amin'ny fanesorana eo dia mety mitentina $ 30.
Dangin Puri Kaja, North Denpasar, Tanànan'ny Denpasar, Bali 80231, Indonezia
Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231
9629 + 87 North Denpasar, Tanànan'ny Denpasar, Bali, Indonezia
+ 62 812-3628-0911
Noho ny fahamaroan'ny marary (indrindra ny aostralianina) dia mila karakaraina mialoha ny fotoana. Eto, feno tsara ny nify, diovina ny lakandrano, ampitomboina fenoina ny nify - 75 $ eo ho eo ity fonosana serivisy ity.
Jl. Patih Jelantik No.81, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonezia
75QH + V2 Kuta, Badung, Bali, Indonezia
+ 62 361 764848
Ny fividianana nify fahendrena ao amin'ity toeram-pitsaboana ity dia mitentina $ 75 ary voafaritry ny fahasarotan'ny fomba fanao. Ny tombo-kase dia hahatratra hatramin'ny $ 110, ny vola farany dia voafaritry ny fahasarotana ihany koa. $ 15 ny fanesorana ny nerveo. Ny satroboninahitra dia 150 $.
Jl. Raya Padonan No.6, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonezia
9554 + 89 Kuta Avaratra, Badung, Bali, Indonezia
Ivontoerana mpitsabo nify
Ity dia toeram-pitsaboana madio sy ambany indrindra. 75 $ ny fanesorana nify iray, ary $ 40 kosa ny famenoana fanafody fanatoranana tsotra izao. Ny sary valanoranom-borona dia handoa $ 35 hafa ary $ 8 ny fakan-kevitra momba an'ity sary ity. Mba hanesorana molar dia mila mandany 150 $ ianao, ary mameno lakandrano - 75 $ farafaharatsiny.
Pertokoan Genteng Biru Blok A No. 32, Jalan Diponegoro No.150, Denpasar Barat, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, Indonezia
86H7 + RF West Denpasar, Tanànan'ny Denpasar, Bali, Indonezia
+ 62 361 222541
Dokotera mpitsabo nify
Ity toeram-pitsaboana ity dia manana mpitsabo nify tsara. Ny vidiny ambony indrindra amin'ny fitrandrahana nify dia $ 40 (raha sarotra ny raharaha). Raha tsotra ny raharaha, dia $ 20 fotsiny ny vidin'ny tolotra io. Ny vidin'ny salanisan'ny famenoana dia $ 30 ary voafaritry ny fahasarotany, ary ho an'ny satroboninao dia mila mandoa $ 190 ianao.
Jl. Danau Batur Raya No.54, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonezia
657P + 5X South Kuta, Badung, Bali, Indonezia
+ 62 878-3950-5553
Inona no tokony hatao any Bali raha manana olana ara-pahasalamana ianao
Raha sendra misy olana ara-pahasalamana mandritra ny fotoana ijanonanao eto amin'ity nosy ity, dia ampirisihina mafy ny hifandray avy hatrany amin'ny tobim-pitsaboana. Ny fiarovana ny mpizahatany avy amin'ny firenena miteny rosianina dia malemy raha oharina amin'ny aretina eo an-toerana, ka mety hisy ny vokany mahatsiravina indrindra. Aleo mandeha any amin'ny tobim-pitsaboana iraisam-pirenena. Anisan'izany ny BIMC, Siloam, SOS iraisam-pirenena ary Kasih Ibu. Ny dokotera indoneziana sy vahiny mahay indrindra miasa any, misy ny fitaovana ilaina rehetra amin'ny maodely farany, laboratoara feno fitaovana ary paroasy tena mahazo aina. Ny fatiantoka lehibe dia ny vidiny avo (indraindray lehibe fotsiny). Saingy, miaraka amin'ny fiantohana, hanjavona ity olana ity.
Na dia any amin'ny nosy aza dia misy hopitaly maro amin'ny haavo mora kokoa, izay manome fanampiana ihany, saingy amin'ny vidiny mora kokoa. Na izany aza, mazava ho azy, ny toe-piainana ao amin'ireny toeram-pitsaboana ireny dia tena ratsy kokoa, ary ny fahazoan'ny mpiasa matetika dia tsy avo indrindra. Ny malaza indrindra amin'ireo toeram-pitsaboana ireo dia ao Denpasar ary manana ny anarana hoe Hopitaly Ambony any Sanglah. Betsaka ny mpitsabo eo an-toerana, ankoatra ny miasa any amin'ny hopitaly, no manao fanendrena mivantana ao an-trano na any amin'ny birao, izay matetika mipetraka akaikin'ny fivarotam-panafody.
Ankoatry ny fitsaboana nentim-paharazana dia manana mpitsabo ihany koa i Bali - "mpanasitrana". Indraindray dia tena mandaitra ny fanampian'izy ireo. Raha ny marina dia tsy miantehitra amin'ny majika loatra izy ireo, fa tena mahalala tsara ny biolojia olombelona ary mahatakatra ny fanafody raokandro. Ny ankamaroan'izy ireo dia manaiky ny marary maimaim-poana, saingy mila milahatra ianao. Amin'ny faran'ny fotoam-pivoriana, azonao atao ny misaotra ny mpitsabo amin'izay vola tianao rehetra.
Ireo toeram-pitsaboana iraisam-pirenena 4 rehetra ao Bali dia miasa isaky ny famantaranandro:
Siloam: adiresy any Kuta - Sunset Road No. 818, telefaona +62361779900.
BIMC: adiresy any Kuta - Jalan Bypass Ngurah Rai 100 X, telefaona any Kuta +62361761263; adiresy ao Nusa Dua - Kawasan BTDC Blok D80363, telefaona any Nusa Dua +623613000911.
Internationl SOS: Kuta, Jalan By Pass Ngurah Rai 505X, telefaona +62361710505.
Kasih Ibu: telefaona +623613003030.
Ilaina ny fiantohana
Ny fankanesana any Bali tsy misy fiantohana ara-pahasalamana dia tsy mampidi-doza. Na inona na inona kasainao hatao mandritra ny roa herinandro na fijanonana maharitra dia tokony hanana fiantohana mandritra ny fotoana nijanonan'ny fikasana rehetra ianao. Amin'ny fandaniana kely dia kely amin'ny fiantohana dia azonao atao, raha sendra kisendrasendra mampalahelo ianao, mitahiry vola be kokoa, hisorohana ny fandaniana amin'ny fanafody lafo dia lafo ao an-toerana. Raha tsy misy fiantohana, aretina miaraka amin'ny areti-mifindra eo an-toerana, ny fianjeran'ny môtô na ny fanapoizinana ara-tsakafo dia mety hiteraka fijaliana ara-batana ihany, fa koa amin'ny fahasahiranana ara-bola lehibe.
Flag of Bali (Indonezia)